Gnome 3.36 inosvika munaKurume 11, 2020 | Linux Vakapindwa muropa
Chikwata cheGNOME chakatumira nezuro chirongwa chekuburitsa yeiyo huru vhezheni yavo yemifananidzo, GNOME 3.36.
GNOME 3.34 ikozvino yave kuwanikwa neakawanda shanduko Uye ikozvino yave nguva yekutarisa pane inotevera inotevera vhezheni yemifananidzo, iyo iri kuronga kusvika munaKurume 11, 2020.
Kuvandudzwa kweGNOME 3.36, iyo ichave iri pasi peGNOME 3.35.x Umbrella bazi, ichatanga ne yekutanga snapshot, GNOME 3.35.1, yakarongerwa kurova veruzhinji muna Gumiguru 12. Izvi zvinoteverwa neyechipiri mufananidzo, GNOME 3.35.2, musi waNovember 23rd.
Zvitatu chete zvifoto zvichaburitswa zveGNOME 3.36 pachinzvimbo chechina sezvazvakange zvichimboitika mune zvakapfuura zviitiko. Yechitatu, GNOME 3.35.3, ine zuva rekuburitsa raNdira 4. Iwo maviri eGNOME 3.36 betas anozoitika muna Kukadzi 1 naFebruary 15, zvichiteerana.
Chekupedzisira, iyo RC vhezheni (yekupedzisira mukwikwidzi) ichasvika muna Kukadzi 29 kubvira 2020 igore rekukwakuka. Shure kwaizvozvo, Iyo yekupedzisira kuburitswa, GNOME 3.36, ichaburitswa munaKurume 11, asi ichasvika munzvimbo dzinozivikanwa zvikuru pamwe neyekutanga kugadzirisa kugadzirisa, pakupera kwemwedzi mumwe chete.
Iyo GNOME 3.36 yekuvandudza kutenderera iri munzira Uye ichauya nekushamisika kune vese vemberi vashandisi uye vekutanga-nguva vashandisi. Kwekutanga nguva sisitimu ichave neyakagadzikana kuburitswa kwenguva refu.
Pamusoro pezvo, kuburitswa kutsva kuchaburitswa pavanenge vakagadzirira, zvisinei kuti izuva ripi revhiki, kunyangwe zvave kujekeswa kuti kuburitswa kwakadzikama uye kusagadzikana kuchasvika musi iwoyo uye matarball matsva achaburitswa neMugovera panzvimbo yeMuvhuro. Iyo yakareba yekuchengetedza nguva yatanga neGNOME 3.34, nerutsigiro kusvika Kurume 28, 2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Gnome 3.36 iri kuuya Kurume 11, 2020